बिक्री सक्षमता सुझावहरू Martech Zone
शुक्रबार, फेब्रुअरी 15, 2013 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 जेन लिसाक गोल्डिंग
परिवर्तनकारी मार्केटिंग र बिक्री फनेलहरू हामीले कसरी व्यवसाय गर्छौं भनेर डिक्टमेन्ट गर्दैछन्। विशेष रूपमा, यसले बिक्री कसरी नयाँ सम्भावनाहरू आउँदैछ र सम्झौता बन्द गर्दैछ भनेर दर्साउँछ। बिक्री सक्षमता मार्केटिंग र बिक्रीको साथ काम गर्दैछ जब एक राजस्व उत्पादन गर्दछ। यी पहलहरू पigned्क्तिबद्ध छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै मार्केटिंग र बिक्री दुबैको सफलताको लागि आवश्यक छ।
एक बजारका रूपमा, अवश्य पनि मैले मार्केटिंग प्रयासहरू महत्त्वपूर्ण पाउँदछन्। तर दिनको अन्त्यमा (परिस्थितिमा निर्भर गर्दै), बिक्री टोलीले अझै पनि सम्भावनामा अझ बढी "गहन" प्रभाव पार्ने छ किनकि त्यहाँ प्रत्यक्ष र व्यक्तिगत सञ्चार हुन्छ (एक पटक उनीहरूले यसलाई अनुमति-आधारित मार्केटिंगमा पछि पार्छ वा सिधा सम्पर्क गर्नुहोस्)। कसरी एक बिक्री दृष्टिकोण बाट संभावनाहरु मा पुग्ने मा एक रणनीतिक योजना पहिले भन्दा बढी महत्वपूर्ण भइरहेको छ। जबकि बिक्री चक्र मार्केटि cycle चक्र जति लामो हुन सक्छ, प्रत्येक व्यक्तिगत टच पोइन्टले निर्धारित गर्न सक्छ कि तपाईं प्रॉस्पेक्टमा बस्नको लागि नजिक हुनुहुन्छ वा उनीहरूले तपाईंसँग सदाको लागि कुरा गरिसकेका छन्।
यदि तपाईं त्यो बैठकको एक चरण नजिक हुनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसो भए यहाँ केहि चीजहरू छन् बिक्री सक्षम सुझाव:
तपाईंको संभावना व्यक्तित्वको प्रकार र सिकाई शैली को लागी एक अनुभव प्राप्त गर्नुहोस्। व्यक्तिले विभिन्न तरिकाले सामग्री सिक्छ र डाइजेस्ट गर्दछ। विशेष रूपमा, त्यहाँ types प्रकारका सिकाईहरू छन्: श्रवण, भिजुअल र किनेस्टिक।
यदि तपाईंको सम्भावना वास्तवमा तपाईंले भनेको कुरा सुनेर नै सिकेको जस्तो देखिन्छ भने, तपाईंको प्रस्तावमा पोडकास्टहरू, सामाजिक लिंकहरू, वा भिडियोहरू समावेश गर्न निश्चित गर्नुहोस्। यी सामग्री माध्यमहरू जुन यस प्रकारको संभावनासँग गुंज्याउनेछन्।
यदि तपाईंको सम्भावनाले ग्राफहरू, चार्टहरू, वा चित्रहरूको साथ बढी प्रतिक्रिया देखा पर्दछ भने, तपाईंसँग तपाईंको हातमा एक दृश्य सिक्नेर छ। यो सिक्ने को सब भन्दा प्रमुख प्रकार हो। यस सामग्रीको लागि धेरै सामग्री प्रकार अपील हुन्छन् - भिडियोहरू, इन्फोग्राफिक्स, ईबुकहरू, ह्वाइटपेपर, छविहरू, आदि। यदि तपाईं आफ्नो “संभावना” को बारे मा "शो" देखाउँनुहुन्छ भने, त्यसोभए उनीहरूले बुझ्ने सम्भावना बढी हुन्छ र तपाईले के भनिरहनु भएकोमा महत्व राख्छन्।
अन्तमा, त्यहाँ जन्मजात सीखाहरू छन्, जसले गरेर सिक्छन्। सामग्री मार्केटिंग परिप्रेक्ष्यबाट ह्यान्डल गर्न यो केहि कठिन छ, तर यो गर्न सकिन्छ। तिनीहरू एक "कसरी" गाईड वा सामग्री चाहन्छन् जसले उनीहरूलाई "कसरी" उनीहरू सफल हुन्छन् भनेर भन्छन्। ह्वाइटपेपर, ईबुक, भिडियो, र वेबिनारहरू जुन केहि पूरा गर्ने कुरामा केन्द्रित छन् यस प्रकारको सम्भावनाको लागि राम्रो छ। विशेषज्ञता देखाउँदै र तिनीहरूलाई ज्ञान प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
सबै सम्भावित मार्गहरू बारे सचेत रहनुहोस्। सामान्यतया, एक कम्पनी मा एक निर्णय निर्माता छैन। कुनै सेवा वा उत्पादनमा लगानी गर्ने निर्णय गर्नु एक टोलीको निर्णय हो। त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जसले अरूले भन्दा बढी भन्छन, यो निर्णय प्रक्रियामा धेरै पार्टीहरूलाई अपील गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईंको उत्पाद वा सेवा को लाभ लिन गइरहेको छ? यसले सायद मार्केटिंग, बिक्री, अपरेशनहरू, र एक्जिक्युटहरू (तल रेखा) समावेश गर्दछ। के तपाईंले पहिचान गर्नुभयो कि कसरी तपाईंको उत्पाद / सेवाले यी प्रत्येक व्यक्तिलाई मद्दत गर्दछ?
हामी कार्य-मा-कल गर्न को लागी प्रश्न देखीरहेको छौं। सम्भावनालाई केहि भन्नुको सट्टा, कम्पनीहरूले उनीहरूको साइटहरूमा क्लिक-थ्रूलाई प्रोत्साहित गर्न प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्दैछन्। व्यक्तिले उनीहरूको लागि के उत्तम छ भन्ने आधारमा निर्णय लिन्छ - सामग्री "व्यक्तित्व" वरपरका टोलीको निर्णयलाई मनाउन मद्दत गर्दछ।
हाम्रो बिक्री प्रस्ताव प्रायोजक, टिन्डरबक्स, धनी मिडिया प्रस्तावहरू सिर्जना गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ जुन प्रत्येक प्रकारका सिकारुहरूलाई अपील गर्दछ, साथै तपाईंको प्रस्ताव कसले हेरिरहेको छ भनेर सावधान रहनुहोस्। यी मेट्रिक्सले अन्ततः सम्झौता बन्द गर्न र ग्राहक प्रोफाइल विकास गर्न मद्दत गर्दछ। बिक्री प्रस्ताव व्यवस्थापन बिक्री सक्षममा सफल हुनको लागि कुञ्जी हो। कसरी प्रभावकारी बिक्री प्रस्ताव सिर्जना गर्ने सिकेर रूपान्तरणहरू बढ्छ र क्लिकहरू हुँदैछन्।
तपाईसँग अरु कुन बिक्री सक्षम सल्लाहहरू छन्? तपाइँ उद्योगमा अरु के देखिरहनु भएको छ?
टैग: संचारसामग्री मार्केटिङप्रोस्पेक्टिबिक्री सक्षमताबिक्री सक्षम सुझाव
उत्तम। प्रेस विमोचन। कहिले